काठमाडौंमा भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन् |
काठमाडौंमा भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन्
February 19, 2022 adminLeaveaComment on काठमाडौंमा भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्,श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन्
तीमध्ये अधिकांशको आआफ्नै दुस्ख थियो, द’र्द थियो। सबै चिन्तित अनुहारमा थिए। उनीहरू भन्दै थिए, ‘वैकल्पिक बाटो भइदिए हामी तुरुन्तै यो पेसा परिवर्तन गर्न तयार छौं।’तर एउटी अन्दाजी ४० देखि ४५ वर्षकी लाग्ने महिलाको कुराकानी, उनको हाउभाउ र बोल्ने शैली बेग्लै थियो। कुरा गर्ने पालो आएदेखि नै उनी मुख खु’म्च्याउँदै बोल्दै थिइन्।
उनको भित्री कुरा सुन्दा म पनि छक्क परेँ। उनले मलाई यसो भनिन्, ‘तपाईं पत्याउनुहुन्न होला, म मारवाडी परिवारकी सदस्य हुँ।मेरो श्रीमान् ठूलो व्यापारी छन्। उनी व्यापारकै सिलसिलामा कहिले भारत, कहिले चीन र कहिले थाइल्यान्ड पुगिरहन्छन्। उनी प्रायस् घरबाहिर भइरहन्छन्।
कहिलेकाहीँ घर आए पनि कि ल्यापटप, कि फोन, कि त मोबाइलमा बिजनेस डिल गर्नमै व्यस्त हुन्छन्। कतिसम्म भने मेरा श्रीमान्‌लाई आफ्ना छोराछोरी कति कक्षामा पढिरहेका छन्, त्यो पनि थाहा हुँदैन।छोराछोरी र श्रीमतीले जति मागे पनि पैसा दिन्छन् तर त्यो पैसा केमा खर्च भयो, केही मतलब छैन। मेरो घरमा नपुग्दो केही छैन।
नोकर, चाकर, हीरामोती, सुनचाँदी, गाडी, बैंक ब्यालेन्स सबै छ। तर, ती सबै कुराले मात्रै नहुँदो रहेछ। ती भएर पनि मेरो शा’री’रिक आवश्यकता पूरा भएन।यो कुरा मेरो श्रीमान्ले बुझिदिएनन्। पैसाका लागि होइन, शा’रीरि’क आवश्यकता पूरा गर्न म’साज पार्लर खोलेकी हुँ मैले। त्यहाँ आउने ग्राहक चित्तबुझ्दो छन् भने म आफैं यौ’ ‘नस’म्ब’न्धका लागि तयार हुन्छु। म यसैमा खुसी छु। यसमा अरूको टा’उको दु’ख्नुपर्ने किन?
बियरको बोतल किन खैरो वा हरियो मात्र हुन्छ?कारण थाहा पाउँदा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ।
भक्तपुरको नगरकोटमा यस्तो भयो!श्रीमानले नै बिश्वास गरेनन,प्रहरीमा पर्यो उजुरी
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्ता हर्कत गर्छन जुन कसैले कल्पना समेत गर्न सक्दैनन्,भिडियोमा हेर्नुहोस
५ मिनेटको ३ सम्म चार्ज लिन्छु! चा”हाना हुनेले सम्पर्क गर्नुस!